အတိုကောက်များ၊ အတိုကောက် ဝေါဟာရများနှင့် ပထမအက္ခရာစုများ (Abbreviations, Acronyms, and Initialisms) - Myanmar Network
အတိုကောက်များ၊ အတိုကောက် ဝေါဟာရများနှင့် ပထမအက္ခရာစုများ (Abbreviations, Acronyms, and Initialisms)
Posted by Language Republic on August 26, 2011 at 10:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အတိုကောက်များ၊ အတိုကောက် ဝေါဟာရများနှင့် အတိုကောက်အက္ခရာများ ခြားနားချက်ကို ယနေ့ ဖော်ပြပါမည်။ စကားစုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သော စကားလုံးများ၏ ပထမအက္ခရာများကို ပေါင်းစုထားသည့် အတိုကောက်အားလုံးကို အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ ပထမအက္ခရာစု initialism သာ ဖြစ်ပါသည်။
အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များ
စကားလုံးကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် တိုအောင် ပြုလုပ်ထားပါက အတိုကောက် abbreviation ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ "etcetera" ကို "etc." ဟု ရေးခြင်း၊ "October" အောက်တိုဘာကို "Oct." ဟု ရေးခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များမှာ ဝေါဟာရအဖြစ် အသံထွက်နိုင်သော အတိုကောက်အမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ National Aeronautics and Space Administration အမျိုးသား လေကြောင်းနှင့် အာကာသ အုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့ကို "NASA" ဟု အတိုကောက်ပြုလုပ်ထားရာ ယင်းအတိုကောက်ကို နာဆာဟု အသံထွက်နိုင်ပါသည်။ Organization of the Petroleum Exporting Countries ရေနံတင်ပို့သောနိုင်ငံများအဖွဲ့ ကို "OPEC" ဟု အတိုကောက်ပြုလုပ်ထားပြီး အိုပက်ဟု အသံထွက်ပါသည်။ အတိုကောက်များအနက် အချို့သာလျှင် အသံထွက်နိုင်သော အတိုကောက်များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြင့် အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များအားလုံး အတိုကောက် abbreviation များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အတိုကောက် abbreviation များ အားလုံး အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များ မဟုတ်ကြပါ။
ပထမအက္ခရာစု initialism များ
ပထမအက္ခရာစု initialism များမှာ နောက်ထပ် အတိုကောက် abbreviation အမျိုးအစား တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ အက္ခရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့် အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များနှင့် ရောတတ်ပါသည်။ သို့သော် အသွင်သာဆင်တူပြီး ပထမအက္ခရာစု initialism များမှာ အသံထွက်၍ မရပါ။ "Federal Bureau of Investigation" ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန နှင့် "Central Intelligence Agency" ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ တို့ကို “FBI”နှင့် “CIA” ဟူ၍ အသီးသီး အတိုကောက် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ "FBI" နှင့် "CIA" ကို အတွင်းလူများက တစ်ခါတစ်ရံ “ဖစ်ဘီ” နှင့် “ဆီအာ” ဟု အသံထွက်ခေါ်ဆိုခြင်းများ ရှိပါသည်။ သို့သော် ၎င်းင်းတို့ကို သာမန်အားဖြင့် စကားလုံးများကဲ့သို့ အသံထွက်ခြင်း မရှိဘဲ “အက်ဖ်ဘီအိုင်” နှင့် “စီအိုင်အေ” ဟုသာ ကမ္ဘာက သိထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပထမအက္ခရာစု initialism များ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားနိုင်ပါသည်။
ပထမအက္ခရာစု initialism များမှာ ဝေါဟာရတစ်ခုတွင် ပါဝင်သော စကားလုံး(များ)၏ ပထမ အက္ခရာ (များ) ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အက္ခရာစုကို စကားလုံးသဖွယ် အသံမထွက်နိုင်ပါ။ ဥပမာ “FBI,” “CIA,” “FYI” (for your information) (သင်သိနိုင်ပါရန်), နှင့် “PR” (public relations) (ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များမှာ ဝေါဟာရတစ်ခုတွင် ပါဝင်သော စကားလုံး(များ)၏ ပထမ အက္ခရာ (များ) ကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး အက္ခရာစုကို စကားလုံးသဖွယ် အသံထွက်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ “NASA” နှင့် “NIMBY”(not in my backyard) (ဒို့အိမ်နားမှာတော့ မဖြစ်ဘူး) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အတိုကောက် abbreviation များမှာ စကားလုံးကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် တိုအောင် ပြုလုပ်ထားသော ပုံစံများ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များမှာ အလွန်အသုံးများလာပြီး ဝေါဟာရတစ်ခုသဖွယ် လက်ခံသုံးစွဲခြင်းလည်း ရှိပါသည်။ "scuba" ကဲ့သို့သော အတိုကောက် ဝေါဟာရ acronym များ ဖြစ်ပါသည်။ မူလက "self-contained underwater breathing apparatus" သီးခြားအသုံးပြုနိုင်သော ရေအောက် လေရှူကိရိယာ ကို အတိုကောက် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ အဘိဓာန်များ တွင် "scuba" ကို စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြကြပါသည်။
ROFL ကို မည်သို့ အမျိုးအစား ခွဲမည်နည်း။
တစ်ခါတစ်ရံ ပထမအက္ခရာစု သို့မဟုတ် အတိုကောက် ဝေါဟာရ ဟူ၍ ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြား၍ မရသော အတိုကောက်များလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ အင်တာနက်တွင် မကြာခဏ "rolling on the floor laughing" ကြမ်းပေါ်လူးလှိမ့်ရယ်မောနေသည် ဟူသော စကားစုကို ROFL ဟု အတိုကောက် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ စာရေးသူက ROFL ကို အတိုကောက် ဝေါဟာရအဖြစ် "roffle" ဟု အမြဲတစေ အသံထွက် ပါသည်။ သို့သော် တွစ်တာမှ မိတ်ဆွေများကို မေးမြန်း၍ စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်သောအခါ ထက်ဝက်ခန့်က အာရ်အိုအက်ဖ်အယ်လ် ဟု အက္ခရာတစ်လုံးချင်း အသံထွက်ကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူကဲ့သို့သော သူများအတွက် ROFL သည် အတိုကောက် ဝေါဟာရ ဖြစ်သော်လည်း အက္ခရာတစ်လုံးချင်း အသံထွက်ကြသူများအတွက် ပထမအက္ခရာစု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ROFL ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို မည်သို့ ခေါ်ဝေါ်သင့်ကြောင်း စာရေးသူ အနေဖြင့် ကျေနပ်လောက် သော အဖြေ ရှာမတွေ့သေးပါ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်သည့် အတိုကောက် abbreviation ဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သင့်သည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။ အချို့သူများကလည်း ယင်းအသုံးအနှုန်းများမှာ ဖုန်းဖြင့် စာတိုပို့ရာတွင် အသုံးပြုသော သင်္ကေတများ/အင်တာနက် အတိုကောက် ဝေါဟာရများဖြစ်ခြင်းကြောင့် အသံထွက် ပြောဆိုရန် မသင့်ကြောင်း ထောက်ပြကြပါသည်။
အဖြတ်အတောက်သင်္ကေတ Punctuation များ
အတိုကောက် ဝေါဟာရ သို့မဟုတ် ပထမအက္ခရာစု တွင် ပါဝင်သော အက္ခရာများနောက်တွင် full stop သို့မဟုတ် period ဟု ခေါ်သည့် အစက်ကလေးများ ထည့်သင့်မသင့် ဝေခွဲမရ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တင်းကြပ်စွာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အချို့ စာအုပ်စာတမ်းများတွင် အက္ခရာတစ်ခုစီမှာ စကားလုံးတစ်လုံး၏ အတိုကောက်ဖြစ်သောကြောင့် full stop ချရန် လိုသည်ဟု ယူဆပြီး အစက်များ ထည့်ပါသည်။ အခြား စာအုပ်စာတမ်းများတွင် အစက်များ မပါလျှင် ပိုမို၍ အမြင်ရှင်းသည်၊ စာလုံးကြီး capital letter များဖြင့်သာ ရေးသားထားခြင်းကြောင့် အတိုကောက်ဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ယူဆလျက် အစက်များ မထည့်ကြပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင် အတိုကောက်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုဖြစ်စေ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ပထမအကြိမ်တွင် စကားစု အပြည့်အစုံကို ဦးစွာ ရေးသားပြီး အတိုကောက်ကို ကွင်းခတ်၍ ဖော်ပြပေးရပါမည်။ အတိုကောက်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို သိနိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့် စာတို ပေးပို့ရာတွင် ဤသို့ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ပညာရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် ရေးသားရာ၌ အတိုကောက်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို စာဖတ်သူ သိရှိလိမ့်မည်ဟု မည်သည့်အခါမျှ မယူဆသင့်ပါ။ အတိုကောက်များကို သက်ဆိုင်ရာ စကားစု အပြည့်အစုံ မဖော်ပြဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် စာကို အများ နားမလည်အောင် ရေးထားသည့်အသွင် ဆောင်စေပါသည်။
စကားစု အပြည့်အစုံကို ရေးသားသည့်အခါ ပုံမှန်အတိုင်းသာ ရေးသားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမ အက္ခရာများကို သာမန်အားဖြင့် စာလုံးကြီးဖြင့် မရေးသားပါက အတိုကောက်တွင် စာလုံးကြီးဖြင့် ဖော်ပြသော်လည်း စကားစု အပြည့်အစုံကို ရေးသားရာတွင် စာလုံးကြီးဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ဥပမာ ပျမ်းမျှနေ့စဉ်ထုထည် average daily volume (ADV) ဟူ၍ စကားစု အပြည့်အစုံကို စာလုံးကြီး မပြုလုပ်ဘဲ ကွင်းထဲမှ အတိုကောက်ကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးသားပါသည်။ ပုံမှန်ရေးရိုးရေးစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ပြီး ပထမအက္ခရာစုကို မိတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် သီးခြား ပြောင်းလဲရေးသားရန် မလိုပါ။
အတိုကောကျမြား၊ အတိုကောကျ ဝေါဟာရမြားနှငျ့ အတိုကောကျအက်ခရာမြား ခွားနားခကျြကို ယနေ့ ဖျောပွပါမညျ။ စကားစုတဈခုတှငျ ပါဝငျသော စကားလုံးမြား၏ ပထမအက်ခရာမြားကို ပေါငျးစုထားသညျ့ အတိုကောကျအားလုံးကို အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym ဟု မဆိုနိုငျပါ။ တဈခါတဈရံ ပထမအက်ခရာစု initialism သာ ဖွဈပါသညျ။
အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြား
စကားလုံးကို တဈနညျးနညျးဖွငျ့ တိုအောငျ ပွုလုပျထားပါက အတိုကောကျ abbreviation ဖွဈပါသညျ။ ဥပမာ "etcetera" ကို "etc." ဟု ရေးခွငျး၊ "October" အောကျတိုဘာကို "Oct." ဟု ရေးခွငျးမြား ဖွဈပါသညျ။ သို့ရာတှငျ အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြားမှာ ဝေါဟာရအဖွဈ အသံထှကျနိုငျသော အတိုကောကျအမြိုးအစားမြား ဖွဈပါသညျ။ ဥပမာ National Aeronautics and Space Administration အမြိုးသား လကွေောငျးနှငျ့ အာကာသ အုပျခြုပျမှု အဖှဲ့ကို "NASA" ဟု အတိုကောကျပွုလုပျထားရာ ယငျးအတိုကောကျကို နာဆာဟု အသံထှကျနိုငျပါသညျ။ Organization of the Petroleum Exporting Countries ရနေံတငျပို့သောနိုငျငံမြားအဖှဲ့ ကို "OPEC" ဟု အတိုကောကျပွုလုပျထားပွီး အိုပကျဟု အသံထှကျပါသညျ။ အတိုကောကျမြားအနကျ အခြို့သာလြှငျ အသံထှကျနိုငျသော အတိုကောကျမြား ဖွဈပါသညျ။ သို့ဖွငျ့ အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြားအားလုံး အတိုကောကျ abbreviation မြား ဖွဈပါသညျ။ သို့ရာတှငျ အတိုကောကျ abbreviation မြား အားလုံး အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြား မဟုတျကွပါ။
ပထမအက်ခရာစု initialism မြား
ပထမအက်ခရာစု initialism မြားမှာ နောကျထပျ အတိုကောကျ abbreviation အမြိုးအစား တဈမြိုး ဖွဈပါသညျ။ အက်ခရာမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားခွငျးကွောငျ့ အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြားနှငျ့ ရောတတျပါသညျ။ သို့သျော အသှငျသာဆငျတူပွီး ပထမအက်ခရာစု initialism မြားမှာ အသံထှကျ၍ မရပါ။ "Federal Bureau of Investigation" ပွညျထောငျစု စုံစမျးစဈဆေးရေးဌာန နှငျ့ "Central Intelligence Agency" ဗဟိုထောကျလှမျးရေး အဂေငျြစီ တို့ကို “FBI”နှငျ့ “CIA” ဟူ၍ အသီးသီး အတိုကောကျ ပွုလုပျထားပါသညျ။ "FBI" နှငျ့ "CIA" ကို အတှငျးလူမြားက တဈခါတဈရံ “ဖဈဘီ” နှငျ့ “ဆီအာ” ဟု အသံထှကျချေါဆိုခွငျးမြား ရှိပါသညျ။ သို့သျော ၎င်းငျးငျးတို့ကို သာမနျအားဖွငျ့ စကားလုံးမြားကဲ့သို့ အသံထှကျခွငျး မရှိဘဲ “အကျဖျဘီအိုငျ” နှငျ့ “စီအိုငျအေ” ဟုသာ ကမ်ဘာက သိထားပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ပထမအက်ခရာစု initialism မြား ဖွဈပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ အောကျပါအတိုငျး မှတျသားနိုငျပါသညျ။
ပထမအက်ခရာစု initialism မြားမှာ ဝေါဟာရတဈခုတှငျ ပါဝငျသော စကားလုံး(မြား)၏ ပထမ အက်ခရာ (မြား) ကို စုစညျးထားခွငျးဖွဈပါသညျ။ အက်ခရာစုကို စကားလုံးသဖှယျ အသံမထှကျနိုငျပါ။ ဥပမာ “FBI,” “CIA,” “FYI” (for your information) (သငျသိနိုငျပါရနျ), နှငျ့ “PR” (public relations) (ပွညျသူ့ဆကျဆံရေး) တို့ ဖွဈပါသညျ။
အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြားမှာ ဝေါဟာရတဈခုတှငျ ပါဝငျသော စကားလုံး(မြား)၏ ပထမ အက်ခရာ (မြား) ကို စုစညျးထားခွငျးဖွဈပွီး အက်ခရာစုကို စကားလုံးသဖှယျ အသံထှကျနိုငျပါသညျ။ ဥပမာ “NASA” နှငျ့ “NIMBY”(not in my backyard) (ဒို့အိမျနားမှာတော့ မဖွဈဘူး) တို့ ဖွဈပါသညျ။
အတိုကောကျ abbreviation မြားမှာ စကားလုံးကို တဈနညျးနညျးဖွငျ့ တိုအောငျ ပွုလုပျထားသော ပုံစံမြား ဖွဈပါသညျ။
တဈခါတဈရံ အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြားမှာ အလှနျအသုံးမြားလာပွီး ဝေါဟာရတဈခုသဖှယျ လကျခံသုံးစှဲခွငျးလညျး ရှိပါသညျ။ "scuba" ကဲ့သို့သော အတိုကောကျ ဝေါဟာရ acronym မြား ဖွဈပါသညျ။ မူလက "self-contained underwater breathing apparatus" သီးခွားအသုံးပွုနိုငျသော ရအေောကျ လရှေူကိရိယာ ကို အတိုကောကျ ပွုလုပျထားခွငျးဖွဈသျောလညျး ယခုအခါ အဘိဓာနျမြား တှငျ "scuba" ကို စကားလုံးတဈလုံးအဖွဈ ထညျ့သှငျးဖျောပွကွပါသညျ။
ROFL ကို မညျသို့ အမြိုးအစား ခှဲမညျနညျး။
တဈခါတဈရံ ပထမအက်ခရာစု သို့မဟုတျ အတိုကောကျ ဝေါဟာရ ဟူ၍ ရှငျးလငျးစှာ ခှဲခွား၍ မရသော အတိုကောကျမြားလညျး ရှိနိုငျပါသညျ။ ဥပမာ အငျတာနကျတှငျ မကွာခဏ "rolling on the floor laughing" ကွမျးပျေါလူးလှိမျ့ရယျမောနသေညျ ဟူသော စကားစုကို ROFL ဟု အတိုကောကျ ပွုလုပျထားပါသညျ။ စာရေးသူက ROFL ကို အတိုကောကျ ဝေါဟာရအဖွဈ "roffle" ဟု အမွဲတစေ အသံထှကျ ပါသညျ။ သို့သျော တှဈတာမှ မိတျဆှမြေားကို မေးမွနျး၍ စဈတမျးကောကျယူကွညျ့သောအခါ ထကျဝကျခနျ့က အာရျအိုအကျဖျအယျလျ ဟု အက်ခရာတဈလုံးခငျြး အသံထှကျကွသညျကို တှရေ့ပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ စာရေးသူကဲ့သို့သော သူမြားအတှကျ ROFL သညျ အတိုကောကျ ဝေါဟာရ ဖွဈသျောလညျး အက်ခရာတဈလုံးခငျြး အသံထှကျကွသူမြားအတှကျ ပထမအက်ခရာစု ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ROFL ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုနျးမြားကို မညျသို့ ချေါဝျေါသငျ့ကွောငျး စာရေးသူ အနဖွေငျ့ ကနြေပျလောကျ သော အဖွေ ရှာမတှသေ့ေးပါ။ ပိုမိုကယျြပွနျ့သော အချေါအဝျေါဖွဈသညျ့ အတိုကောကျ abbreviation ဟုသာ ချေါဝျေါသငျ့သညျဟု ထငျမွငျပါသညျ။ အခြို့သူမြားကလညျး ယငျးအသုံးအနှုနျးမြားမှာ ဖုနျးဖွငျ့ စာတိုပို့ရာတှငျ အသုံးပွုသော သငေ်ျကတမြား/အငျတာနကျ အတိုကောကျ ဝေါဟာရမြားဖွဈခွငျးကွောငျ့ အသံထှကျ ပွောဆိုရနျ မသငျ့ကွောငျး ထောကျပွကွပါသညျ။
အဖွတျအတောကျသငေ်ျကတ Punctuation မြား
အတိုကောကျ ဝေါဟာရ သို့မဟုတျ ပထမအက်ခရာစု တှငျ ပါဝငျသော အက်ခရာမြားနောကျတှငျ full stop သို့မဟုတျ period ဟု ချေါသညျ့ အစကျကလေးမြား ထညျ့သငျ့မသငျ့ ဝေခှဲမရ ဖွဈနိုငျပါသညျ။ တငျးကွပျစှာ စညျးမဉျြးသတျမှတျထားခွငျး မရှိပါ။ အခြို့ စာအုပျစာတမျးမြားတှငျ အက်ခရာတဈခုစီမှာ စကားလုံးတဈလုံး၏ အတိုကောကျဖွဈသောကွောငျ့ full stop ခရြနျ လိုသညျဟု ယူဆပွီး အစကျမြား ထညျ့ပါသညျ။ အခွား စာအုပျစာတမျးမြားတှငျ အစကျမြား မပါလြှငျ ပိုမို၍ အမွငျရှငျးသညျ၊ စာလုံးကွီး capital letter မြားဖွငျ့သာ ရေးသားထားခွငျးကွောငျ့ အတိုကောကျဖွဈကွောငျး နားလညျပွီး ဖွဈသညျဟု ယူဆလကျြ အစကျမြား မထညျ့ကွပါ။
နောကျဆုံးအနဖွေငျ့ တရားဝငျစာရှကျစာတမျးတဈခုတှငျ အတိုကောကျမညျသညျ့အမြိုးအစားကိုဖွဈစေ အသုံးပွုမညျဆိုပါက ပထမအကွိမျတှငျ စကားစု အပွညျ့အစုံကို ဦးစှာ ရေးသားပွီး အတိုကောကျကို ကှငျးခတျ၍ ဖျောပွပေးရပါမညျ။ အတိုကောကျ၏ အဓိပ်ပာယျကို သိနိုငျစရေနျဖွဈပါသညျ။ ဖုနျးဖွငျ့ စာတို ပေးပို့ရာတှငျ ဤသို့ လုပျဆောငျရနျ မလိုအပျသျောလညျး ပညာရှငျတဈဦးအနဖွေငျ့ ရေးသားရာ၌ အတိုကောကျ၏ အဓိပ်ပာယျကို စာဖတျသူ သိရှိလိမျ့မညျဟု မညျသညျ့အခါမြှ မယူဆသငျ့ပါ။ အတိုကောကျမြားကို သကျဆိုငျရာ စကားစု အပွညျ့အစုံ မဖျောပွဘဲ အသုံးပွုခွငျးသညျ စာကို အမြား နားမလညျအောငျ ရေးထားသညျ့အသှငျ ဆောငျစပေါသညျ။
စကားစု အပွညျ့အစုံကို ရေးသားသညျ့အခါ ပုံမှနျအတိုငျးသာ ရေးသားရနျဖွဈပါသညျ။ ပထမ အက်ခရာမြားကို သာမနျအားဖွငျ့ စာလုံးကွီးဖွငျ့ မရေးသားပါက အတိုကောကျတှငျ စာလုံးကွီးဖွငျ့ ဖျောပွသျောလညျး စကားစု အပွညျ့အစုံကို ရေးသားရာတှငျ စာလုံးကွီးဖွဈရနျ မလိုအပျပါ။ ဥပမာ ပမျြးမြှနစေ့ဉျထုထညျ average daily volume (ADV) ဟူ၍ စကားစု အပွညျ့အစုံကို စာလုံးကွီး မပွုလုပျဘဲ ကှငျးထဲမှ အတိုကောကျကိုသာ စာလုံးကွီးဖွငျ့ ရေးသားပါသညျ။ ပုံမှနျရေးရိုးရေးစဉျအတိုငျး ဖွဈပွီး ပထမအက်ခရာစုကို မိတျဆကျသညျ့အနဖွေငျ့ သီးခွား ပွောငျးလဲရေးသားရနျ မလိုပါ။
Permalink Reply by 2rn0vld3dnvdg on August 26, 2011 at 12:49
I like very much such abbreviations. Thank you so much.
Permalink Reply by Ratan Biswas on August 26, 2011 at 13:54
Permalink Reply by 2zoteoi0r1ztg on August 27, 2011 at 13:24
Permalink Reply by 122yq82d2bfdb on August 29, 2011 at 11:46
00607.jpg, 17 KB
Permalink Reply by 0qe9n4cz8xvyy on August 29, 2011 at 11:53
Permalink Reply by laelaekaykhaing on August 29, 2011 at 18:11
Permalink Reply by Thaikhtoon on August 30, 2011 at 16:02
Thank you very much, could you please let me know COB, I knew the meaning , that is dead line but What for C and O and B
Permalink Reply by zaw phyo naing on August 30, 2011 at 23:19
Permalink Reply by yewinaung on August 31, 2011 at 17:05
Thank you very much for i know about abbreviation.
Permalink Reply by zawzaw on September 3, 2011 at 19:22
Permalink Reply by hinnayee on September 7, 2011 at 16:52
Permalink Reply by Tharaphiwin on September 21, 2011 at 12:03